တက်တူးထိုးတာဘယ်လောက်ကျလဲ။ ဒီနေရာမှာတက်တူးရဲ့စျေးနှုန်းကိုရှာဖွေပါ စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
Ignacio Sala | | အချိန်အား
¿တက်တူးထိုးတာဘယ်လောက်ကျလဲ? မေးခွန်း၏တိကျသောအဖြေကိုမသိရှိမှီ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့သည်မည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းအသေးစိတ်ရှင်းပြပြီး၊ သူတို့၏စျေးနှုန်းသည်အစကန ဦး မျှော်မှန်းထားသည်ထက်များသောအားဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားသည်ကိုရှင်းပြပါလိမ့်မည်။
တက်တူးထိုးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆေးထိုးအပ်များနှင့်အခြားအသုံးအဆောင်များကို အသုံးပြု၍ အရေပြားအရောင်ကိုအမြဲတမ်းပြုပြင်ခြင်းကိုနားလည်သည်။ အရေပြားပေါ် မူတည်၍ ခြယ်ဆေးထိုးပါ။ တက်တူး၏ပထမဆုံးအထောက်အထားကိုပီရူးမှဘီစီ ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှစ၍ Chinchorro ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဆိုင်သောမိခင်များမှတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤအစောပိုင်းတက်တူးများသည်ရိုးရှင်းပြီးအရွယ်ရောက်သူအမျိုးသားများ၏နှုတ်ခမ်းတွင်သာမျဉ်းကြောင်းပြခဲ့သည်။
ပီရူးနိုင်ငံတွင်ပထမဆုံးသောတက်တူးများကိုတွေ့ရှိခဲ့ရသော်လည်းတက်တူးဟူသောစကားလုံးသည် Samoan "tátua" မှလာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာနှစ်ကြိမ်ရိုက်ခြင်း (ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့ပြုလုပ်ရန်ပုံမှန်နည်းလမ်း) ။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတက်တူးဟူသောစကားလုံးသည်မတူညီသောမြို့ပြမျိုးနွယ်စုများနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေခဲ့သည် ဒီနေ့ခေတ်မှာ Tatu (သို့) Tattoos လို့လည်းခေါ်တယ်။ အဆုံးစွန်သောအဓိကအားဖြင့်ဒီယဉ်ကျေးမှုကိုအကြောင်းကိုအများဆုံးစိတ်အားထက်သန်ခြင်းဖြင့်အသုံးပြုသည်။
များစွာသောလူမဟုတ်ရင်ထင်လိမ့်မည် တက်တူးတွေကလူတွေရဲ့စရိုက်ကိုမပြောင်းလဲဘူး။ တက်တူးထိုးတဲ့သူတွေကတော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စံနမူနာကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှတက်တူးထိုးထားသောလူများကိုတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ သို့သော်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က၎င်းသည်သံသယရှိသောနာမည်ကြီးသူများနှင့်အမြဲဆက်စပ်ခဲ့သည်။
1 Tattoo စတိုင်များ
1.2 တန်ဆာဆင်သို့မဟုတ်ဂျီ ometric မေတြီ
4.3 ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်း (သို့) လွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်
4.4 အဆိုတော် cache ကို
နှစ်များတစ်လျှောက်တက်တူးများသည်သာမန်အရာတစ်ခုဖြစ်လာပြီးလူအများကြားတွင်အလွန်လူကြိုက်များလာပြီးကျွန်ုပ်တို့ပင်ရှာတွေ့နိုင်သည် ရုပ်မြင်သံကြားမှအစီအစဉ်များနှင့်လုပ်ဆောင်လိုသောသူများ၏လှုံ့ဆော်မှုကိုပြသသည့်ကွဲပြားခြားနားသောအစီအစဉ်များ။ အမျိုးမျိုးသောတက်တူးအမျိုးအစားများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဤအရေပြားအတွင်းထည့်သွင်းခြင်းကိုပြုလုပ်သောအလှပြင်ဆိုင်အားလုံးသည်စတိုင်အားလုံးတွင်အထူးပြုထားခြင်းမရှိသောကြောင့်၊ အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုနိုင်သည့်အတိုင်းအရေအတွက်များစွာရှိပါသည်။ သို့သော်ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အဓိကအလေးပေးဖော်ပြထားသည်။ ။ ယုတ္တိနည်းအရ၊ တက်တူးတစ်မျိုးစီ၏စျေးနှုန်းသည်စျေးနှုန်းချိုသာသည်။ ၎င်းတို့အားဆွဲခြင်းသို့မဟုတ်အနုပညာရှင်၏လက်ထဲတွင်အပ်ထားခြင်းထက်တက်တူးထိုးနန်းတော်ပုံစံကိုကပ်ထားခြင်းသည်အတူတူမဟုတ်ပါ။
၎င်းသည်အမျိုးသမီးများနှင့်ပင်လယ်မှုတ်သွင်းထားသော iconography နှင့်တောက်ပသောအရောင်များကိုပေါင်းစပ်ထားပြီး၎င်းမှကျွန်ုပ်တို့မြင်နိုင်သည် ခြေဖ ၀ ါးများဖြတ်သန်းသွားသောကျောက်ဆူးများသို့မိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်းရှိသောအမြီးနှင့်ပြည့်နေသောနို့တိုက်သတ္တဝါများ။ ခြင်္သေ့ခြင်္သေ့ကိုတွေ့နိုင်သည်။
တန်ဆာဆင်သို့မဟုတ်ဂျီ ometric မေတြီ
ဤတက်တူးအမျိုးအစားများသည်ဤလောကထဲ ၀ င်လိုသူများအကြားတွင်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်လာသည်။ သူတို့ကများသောအားဖြင့် monochromatic ဖြစ်ကြပြီး သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဂျီ ometric မေတြီကိန်းဂဏန်းများကိုပြသည် စက်ဝိုင်းသို့မဟုတ်လိုင်းများအားဖြင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
ဒီပုံစံအသစ်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ၇၀ ပြည့်နှစ်များမှစတင်ခဲ့ပြီးရိုးရာစတိုင်များကိုဂန္ထဝင်များနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည် သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုပုံဆွဲခြင်း၏လှုပ်ရှားမှုကိုတုပသည့်လက်တွေ့ကျသောရုပ်ပုံများကိုပြသည်။ ဒီတက်တူးအမျိုးအစား၏စျေးနှုန်းသည်များသောအားဖြင့်ပုံမှန်စျေးများထက်များစွာစျေးကြီးသည်။ အဓိကအားဖြင့်မတူညီသောဆိုးဆေးများအသုံးပြုခြင်းအပြင်အလုပ်အားပိုမိုလက်တွေ့ကျစေရန်အတွက်လိုအပ်သည်။
ဒီတက်တူးအမျိုးအစားကကျွန်တော်တို့ကိုအဓိကတက်တူးအများစုမှာမတွေ့ရတဲ့အဓိကအင်္ဂါရပ်နှစ်ခုပါရှိပါတယ်။ ညှိုးနွမ်းအရောင်များနှင့်လိုင်းများမရှိခြင်း။ ထိုပန်းချီကားများကပန်းချီကားများကိုပန်းချီကားများ (ဤအရပ်မှအမည်) ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပုံပန်းသဏ္presentာန်ဖြင့်ဖော်ပြသည်။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုပုံဆွဲ၏အကြမ်းဖျင်းကိုပြသသည့်အနက်ရောင်လိုင်းများဖြင့်ဖော်ပြသည်။
ဒီတက်တူးအမျိုးအစားတွေဟာတက်တူးထိုးတဲ့နေရာအတော်များများမှာတွေ့နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ် တင်းပလိတ်များအပေါ်အခြေခံထားတယ် တက်တူးထိုးရန်လူကိုရွေးချယ်နိုင်သည် ဒီတက်တူးမျိုးကအောက်ခံပုံအတိုင်းအလွန်ထင်ရှားသောဂရေးဖီတီ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသတိရစေနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်မည်သည့်အရိပ်သို့မဟုတ် gradients မဆို monochrome ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်နိုင်ငံများစွာ၌အသုံးများဆုံးသောဆေးဖြစ်သည် တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကသူ့အကျိုးစီးပွားအများကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်မှုတွေအများကြီးမပေးထားဘူး။ ဒီတက်တူးအမျိုးအစားကရိုးရှင်းတဲ့ပုံဆွဲခြင်း၊ သင်္ကေတများ၊ အက္ခရာများ၊ ဘာသာရေး၊ သူတို့ကိုလုပ်ဖို့အနက်ရောင်ကိုသာသုံးတယ်။ ဤတက်တူးအမျိုးအစားကိုအသုံးပြုသူများရွေးချယ်သည့်အရာသည်သူတို့ဘာလုပ်ချင်သည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိဘဲတက်တူးကမ္ဘာသို့ ၀ င်ရောက်လိုသောသူများဖြစ်သည်။
ယူနိုက်တက်စတိတ်မှလာသည့်တက်တူးအများစုနှင့်မတူသည်မှာ Dotwork စတိုင်လ်သည် မူလကဗြိတိန်မှ နှင့်၎င်း၏နာမကိုအမှီညွှန်ပြသည့်အတိုင်း (အစက်သည်အင်္ဂလိပ်လိုအမှတ်ဖြစ်ပါသည်) ကစဉ်ဆက်မပြတ် dotting နှင့်အရောင်မဆိုအချိန်မရွေးအသုံးမပြုသည်ဘယ်မှာအနက်ရောင်သာအသုံးပြုသည် kn мүнөзအဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသောနိုင်ဘူး။ တက်တူးထိုးနည်းကိုလေ့လာလိုသူများအတွက်ဤ tattoo ပုံစံကိုအကြံပြုသည်။
ဆေးခြယ်တဲ့အပ်ကိုသုံးတဲ့တက်တူးအများစုနဲ့မတူတာကဖြီးအမျိုးအစားပါ သူတို့ကဖြီးတစ်မျိုးကိုသုံးတယ်ဒါကြောင့်၎င်းရဲ့အသုံးချပုံကအစဉ်အလာထက်ပိုပြီးရှုပ်ထွေးတယ်၊ ဒါကြောင့်အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းတဲ့တက်တူးတွေကိုတွေ့ရလေ့ရှိတယ်။ ဒီနည်းပညာကိုအဓိကအားဖြင့်ကြီးမားသောတက်တူးများကိုပြုလုပ်ရန်နေရာအကျယ်အဝန်းရှိသည့်နေရာတွင်ပြုလုပ်သည်။
တက်တူး၏ကြာရှည်ခံခြင်းသည်တက်တူးအနုပညာရှင်၏အတွေ့အကြုံနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရ၊ အသုံးပြုသောခြယ်ပစ္စည်းများကိုအရေပြားအောက်တွင်မိတ်ဆက်ပေးသည်၊ သို့သော်အရေပြားတွင်မတူညီသောအလွှာများရှိသည်။ ပိုမိုနက်ရှိုင်းလေနှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်ခံသည်။ အကယ်၍ အခြားတစ်ဖက်တွင်ယင်းတို့ကိုအနည်းငယ်သာအသုံးပြုပါကအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအရေပြားပေါ်ရှိအရောင်များပျောက်ကွယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ငါတို့ကတက်တူးထိုးချင်တယ်၊ ငါတို့တစ်သက်တာသက်တမ်းဆက်ချင်တယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတယ်ဆိုရင်အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိတဲ့အလှပြင်ဆိုင်ကိုသွားရမယ်၊ မဟုတ်ရင်ငါတို့ချစ်ရသူတက်တူးထိုးမှုန်ဝါးစေချင်တယ်။
အကယ်၍ တက်တူးထိုးခြင်းသည်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြုလုပ်ပြီးအရေပြား၌ရှိလျှင်၊ ၎င်းကိုဖယ်ရှားရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာလေဆာနည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ထိုတက်တူးထိုးအရေပြားအပေါ်ယံသို့ရောက်မလာပေမယ့်အပေါ်ယံအလွှာ၌တည်ရှိ၏လျှင်, အရေပြား၏အပြင်ဘက်အလွှာ၏သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးနှင့်အတူ, တက်တူးထိုးတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်, သို့သော်, အသုံးပြုမှုလိုအပ်ကြောင်းသဲလွန်စအချို့ကိုအမြဲရှိစေခြင်းငှါ, လုံးဝဖယ်ရှားပစ်ရန်လေဆာ။
အဆိုပါလေဆာအမှန်တကယ်တက်တူးမင်ကိုဖယ်ရှားမထားဘူး၎င်းသည်အသားအရေမှတဆင့်စုပ်ယူပြီးနောက်ပိုင်းတွင် lymphatic system ဖြင့်ဖယ်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက်သေးငယ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုခွဲထုတ်သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းတက်တူးထိုးဆေးခန်းကိုဖြတ်သန်းခဲ့ကြသောသုံးစွဲသူ ၈၀ မှ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းအကြားရှိအချို့စစ်တမ်းများအရ ၄ င်းတို့၏တစ်သက်တာလုံးဆေးမင်ကြောင်ထိုးခြင်းကိုဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်။
အထူးသဖြင့်အရွယ်အစားနှင့်အရောင်များပေါ်မူတည်ပြီးတက်တူး၏စျေးနှုန်းမှာအလွန်ကွဲပြားခြားနားသော်လည်းစျေးနှုန်းအပေါ်လွှမ်းမိုးမှုတစ်ခုတည်းသောအချက်များမဟုတ်ပါ။ ယုတ္တိနည်းအရကြီးမားသောအရွယ်အစားနှင့်အရောင်များဖြင့်၎င်းသည်ကုန်ကျစရိတ်များပြားသည်။ သို့သော်တက်တူးထိုးရန်ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်ရန် ကျနော်တို့အကောင့်သို့အောက်ပါဝိသေသလက္ခဏာများကိုယူနိုင်ပါတယ်.
တက်တူးထိုးလေလေတက်တူးသမားသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်တွင်ပုံဆွဲရန်ကြာသည်။ ငါတို့ကျောတစ်ခုလုံးကိုအရောင်တစ်ချောင်းနဲ့ဖုံးအုပ်ထားတဲ့တက်တူးထိုးချင်ရင်၊ \_ t ယူရို ၈၀၀-၉၀၀ လောက်ပေးရတယ်အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်တစ်လုံး၏အရွယ်အစားထက်သေးငယ်သည့်အရာငယ်လေးတစ်ခုရွေးချယ်လျှင်စျေးနှုန်းသည်များသောအားဖြင့်ယူရို ၅၀ မှ ၆၀ ခန့်ဖြစ်သည်။
အရောင်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်တက်တူးထိုးစျေးနှုန်းကိုမြင့်တက်စေသည်သင်လိုအပ်သောဆေးအမျိုးမျိုးကိုအရောင်များကိုရောနှောခြင်းကိုရှောင်ရှားလိုသောကြောင့်၊ ထို့အပြင်အတူတူပင်၏ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်လုပ်ရန်နာရီအရေအတွက်တိုးလာသည်။ အနက်ရောင်ဖြင့်ပြုလုပ်သောတက်တူးထိုးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားယူရို ၅၀-၆၀ ခန့်ကုန်ကျနိုင်သည်၊ အကယ်၍ အရောင်ရချင်လျှင်၎င်းစျေးနှုန်းကိုနှစ်ဆတိုးနိုင်သည်။
ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်း (သို့) လွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်
တက်တူးထိုးသည့်နေရာများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလှပြင်ဆိုင်၌ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုအလျင်အမြန်သဘောပေါက်ရန်ခွင့်ပြုသည့်တင်းပလိတ်ဖိုင်များစွာကိုရှာနိုင်သည်။ ဒီဖယောင်းစက္ကူအမျိုးအစားကိုသုံးခြင်းသည်တက်တူးအသစ်စက်စက်အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည် ငါတို့ကိုယ်ခန္ဓာ၌။ အကယ်၍ အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းကိုသယ်ဆောင်ပါက၎င်းသည်သာမန်မဟုတ်သည့်အပြင်တက်တူးထိုးသူသည်သုံးစွဲသူ၏အရွယ်အစားနှင့်ဆန္ဒများကိုလိုက်နာရမည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ကုန်ကျစရိတ်မြင့်တက်မည်။
ဒါပေမဲ့ အဆိုပါတက်တူးထိုးအနုပညာရှင်တစ် ဦး အသိအမှတ်ပြုဂုဏ်သိက္ခာရှိပါက, ငါတို့ကအခမဲ့လက်ပေးရနျရှေးခယျြမှုနှငျ့ဆကျသှယျလိုသမြှကိုအမှတျရနျကြှနျုပျတို့ရှေးခယျြနိုငျသညျ။ ဤကိစ္စများတွင်အထူးသဖြင့်ကျောရိုးသို့မဟုတ်ရင်ဘတ်စသည်တို့ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ထည်၏ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ဒီဇိုင်းဆွဲလိုပါကစျေးနှုန်းတက်သည်။
အဆိုတော် cache ကို
တက်တူးထိုးတဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုသင်တကယ်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်လုပ်နိုင်တာအကောင်းဆုံးကတော့ အများဆုံးကိုယ်စားပြုအကျင့်ကိုကျင့်နဲ့သူ့စာအုပ်ဘို့သူ့ကိုမေးပါ မင်းဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ။ နည်းနည်းလောက်ကံကောင်းခြင်းဖြင့်တက်တူးထိုးခန်းမကိုဖြတ်သန်းသွားသောကျော်ကြားသူကိုသင်တွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ခုချင်းစီတွင်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စျေးနှုန်းများရှိသော်လည်း၊ သူတို့၏အရည်အသွေးသည်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းမဖြစ်နိူင်သောကြောင့်၎င်းတို့အားကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောစျေးနှုန်းများကသိပ်မများလွန်းပါကကျွန်ုပ်တို့အမြဲသံသယဖြစ်ဖွယ်ဖြစ်ရမည်။
ဒီတက်တူးတွေကိုစိတ်ထဲမှာထားပါ ငါတို့အရေပြားမှာထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်လာတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေဖြစ်တယ်။ သောစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းရောဂါများကိုရှောင်ရှားရန်အနည်းငယ်ရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများလိုအပ်သည်။ ဒီကမ္ဘာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့မည်သည့်ပညာရှင်မဆိုလက်အိတ်၊ တစ်ခါသုံးအပ်များအသုံးပြုပြီးတက်တူးထိုးပြီးသည်နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုပိုးကင်းစေသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းကြည့်။ ၎င်းသည်အနည်းဆုံးတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုအခြေအနေနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကိုလျှင်မြန်စွာကြည့်နိုင်သည်။
ငါပြီးခဲ့သည့်အချက်၌ငါမှတ်ချက်ချသကဲ့သို့, တက်တူးထိုးအချို့သောတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးအစီအမံများမတွေ့ရှိလျှင်, ဒါကြောင့်အပြင်ကူးစက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်းနှင့်အတူကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်း အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီသို့မဟုတ်အသည်းရောင်ရောဂါ (ပိုးဘီ) ကဲ့သို့သောရောဂါများကိုကူးစက်စေခြင်းဖြင့်၎င်းသည်အရေပြားကူးစက်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည် တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်လာနိုင်သောခြယ်ပစ္စည်းများ၏အသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ အချို့သောခြယ်ပစ္စည်းများသည်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်သောဓာတုဗေဒများဖြစ်သောသတ္တုများသို့မဟုတ်ဟိုက်ဒရိုကာဘွန်များပါ ၀ င်နိုင်သောကြောင့်အတွေ့အကြုံရှိသောကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်အမြဲတမ်းအကြံပြုလိုပါသည်။
အစိမ်းရောင်တက်တူးများတွင်နီကယ်နှင့်ခရိုမီယမ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ကဒ်မီယမ်ကိုအဝါရောင်၊ အပြာရောင်အတွက်ကိုဘော့ဆား၊ ocher တန်တိုင်းအတွက်သံအောက်ဆိုဒ်၊ အဖြူရောင်တိုက်တေနီယမ်နှင့်သွပ်အောက်ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုပါသည်။ အော်ဂဲနစ်ခြယ်ပစ္စည်းများကိုလည်းခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းသည်ခံနိုင်ရည်နည်းပြီး၎င်းကိုလည်းခံနိုင်သည် သူတို့ကအချို့လူများတွင်မတည့်တုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
သင်မြင်သည့်အတိုင်းပြင်ဆင်ရန်ခက်ခဲသည် တစ် ဦး တက်တူးထိုး၏စျေးနှုန်း မည်သည့်အမျိုးအစားနှင့်မည်သည့်ပုံစံကိုသင်လိုချင်သည်ကိုမသိဘဲ သင်အခြားသုံးစွဲသူများအားကူညီလိုပါကသင်၏တက်တူးထိုးခြင်းသည်သင်မည်မျှကုန်ကျသည်ကိုမှတ်ချက်ပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါ။ ၎င်းသည်ပေးဆပ်ရန်စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်ရယူရန်အတွက်ကောင်းသောရည်ညွှန်းချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » အချိန်အား » တက်တူးထိုးတာဘယ်လောက်ကျလဲ။